Ikhaya > Imikhiqizo > Shaker Ophihliwe
(Yonke imikhiqizo engu-9 ye-Shaker Ophihliwe)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Shaker Ophihliwe ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Shaker Ophihliwe. Nikeza ikhwalithi ephezulu Shaker Ophihliwe ngentengo ephansi eshibhile.
Umbukiso we-Digital Shaker we-Shaker Shaking Incubator Igama lomkhiqizo: I- Digital-display Shaking incubator Inombolo No.:BS-1E I-Digital-bonisa Ukuthungatha izilawuli ze-microcomputer zokufaka
Tag: Umkhwali we-Orbital ophezulu , I-Shaker ye-Orbital Shab , Shaker Orbital Instrument
I-KJ201BS I-High Quality Lab Orbital Shaker Oscillator Instrument Igama lomkhiqizo: SHAKER WOMSEBENZI Inombolo:
I-SK-O180-S I-USB Digital ORBITAL SHAKER yomugqa wedijithali
Tag: I-Linear Digital Shaker , I-Orbital Digital Shaker , I-Led Screen Shaker
I-SK-O180-S I-USB Digital ORBITAL SHAKER yomugqa wedijithali Igama lomkhiqizo: I-LED DIGITAL ORBITAL SHAKER Item No: SK-O180-S • Umthamo weMax.load ungama-3kg ngeplatifomu • Ama-LEDs amabili wokubonisa okuzimele kwesikhathi
Shaker Ophihliwe ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Shaker Ophihliwe eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Shaker Ophihliwe ngokuqondile kusuka ku-Shaker Ophihliwe abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.